लघुवित्तको मर्जरमा तिब्रता : कुृनकुन मर्जर भए ? कुनकुन हुँदैछन् ? ~ Banking Khabar
बैंकिङ खबर । नयाँ लघुवित्त खुल्ने क्रमसँगसँगै लघुवित्तहरु मर्जरमा जाने क्रम पनि तीव्र रुपमा अघि बढिरहेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई विभिन्न सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो । अधिकांश लघुवित्तहरु मर्जरमा जादैछन् । केही प्रक्रियामा छन् भने केही पार्टनरको खोजीमा छन् ।
स्वस्तिक लघुवित्त, मिथिला लघुवित्त, मिर्मिरे लघुवित्त, स्पर्श लघुवित्त लगायत मर्जरको प्रकृयामा छन् । त्यसैगरी घरेलु लघुवित्त, आशा लघुवित्त लगायतले पनि मर्जरको बाटो खोजेका छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ८९ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था संचालनमा छन् । जसमध्ये केही लघुवित्तको मर्जर प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ । कालिका लघुवित्त र जनसेवी लघुवित्त मर्जरपछि एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन् । वोमी माइक्रोफाइनान्स र नागरिक लघुवित्तको पनि मर्जरपछि एकीकृत कारोबार सुरु भइसकेको छ । यसबाहेक, दर्जनबढी लघुवित्त मर्जर प्रक्रियामा छन् भने दर्जनौँ लघुवित्त मर्जरमा जानका लागि छलफल गर्दैछन् ।